Budata Norton AntiVirus maka Windows
Free Budata maka Windows (79.88 MB)
Budata Norton AntiVirus,
Norton AntiVirus bụ usoro ihe ngwọta na nchekwa nchekwa ọkachamara na-enye nchebe dị elu megide nje, spyware, na nkenke, mmemme niile na faịlụ ndị nwere ike imerụ kọmputa gị. Ọ bụrụ nịchọrọ ichebe kọmputa gị nke ọma ma debe sọftụwia jọgburu onwe ya nke nwere nsogbu nchekwa na sistemu gị, ị nwere ike ime nke a na Norton AntiVirus, nke na-enye nchebe oge.
Mmemme ahụ, nke na-enyocha ihe niile ị na-eme na kọmpụta gị na-enweghị nsogbu gị na ndabere, dọrọ gị aka na ntị mgbe ọ hụrụ ihe egwu na ụdị mgbanwe data ọ bụla. Norton AntiVirus, nke nwekwara ike ijikwa mmemme e-mail na ozi ngwa ngwa (IM), na-echebe gị pụọ na nje nwere ike ịbịa site na ndị ọzọ ma kewaa faịlụ nwere sọftụwia ọjọọ dịka nje, spyware na adware na ndị nkịtị.
Norton AntiVirus bụ otu mmemme na-emelite onwe ya mgbe niile ma na-enye nchebe kachasị mma na usoro ya nke a na-akwadebe mgbe niile megide nje na egwu kachasị ọhụrụ, si otú a na-eme ka usoro gị dị njikere maka egwu niile.
Norton AntiVirus Ụdịdị
Nha faịlụ: 79.88 MB
Mmepụta: Symantec Corp.